अर्को कहालीलाग्दो घटना: विवाह कै दिन बेहुलीको निधन घटनाको विवरण यस प्रकार छ – Sandes Post
मुख्य पृष्ठ /News/अर्को कहालीलाग्दो घटना: विवाह कै दिन बेहुलीको निधन घटनाको विवरण यस प्रकार छ
अर्को कहालीलाग्दो घटना: विवाह कै दिन बेहुलीको निधन घटनाको विवरण यस प्रकार छ
3,2443minutes read
बुटवल । वेहुली बनेर जिवनका आगामी दिनको कल्पना सजाउँदै गएकी एक युवतीले त्यसै दिन आफ्नो जिवन समाप्त गरेकी छन् । जातिय विभेदका कारण एक किशोरीले अनाहकमा आफ्नो जिवन त्याग गर्ने निर्णयमा पुगेकी हुन । कथित उपल्लो जातसंग विवाह गरेकी एक किशोरीले चरम जातीय विभेदको ज्यादती खेप्दै अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको हो । प्रदेश ५ को रुपन्देहीमा भएको यो घटनाले अहिले मुलुकभर चर्चा छ । जातिय विभेदको यो चरम नमुनाले लोकतन्त्रकै खिल्ली उडाएको छ । दुई दिनकै फरकमा नेपालमा जातिय विभेदका कारण ४ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । त्यस्तै कर्णाली प्रदेश रुकुम पश्चिममा पनि जातिय विभेदका कारण वेहुला सहित तीन किशोरको ज्यान गएको छ । वेहुली लिन भन्दै १९ जना साथी लिएर जाजरकोट गएका उनको ज्यान गएको हो । ति युवकलाई साथ दिन गएका अन्य २ जनाले पनि ज्यान गुमाएका छन् ।
रुपन्देहीको देवदह नगरपालिका वडा ११ बड्की गुम्बाकी १५ वर्षीया दलित समुदायकी किशोरीले पारिवारिक उत्पिडन सहन नसकेर ज्यान गुमाएकी छन् । उनी विवाह गरेर पतिको घर गएकी दिन झु’ण्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेकी थिएन् । किशोरी अङ्कारा पासी बेहुली बनेकै दिन मृत फेला परेकी हुन् । देवदहकी अङ्घिरा पासीले स्थानीय २२ वर्षीय वीरेन्द्र भरसँग प्रेम विवाह गरेकी थिइन् । गत जेठ ९ गते गाउँमा भएको भेला र छलफल पछि वडाका वडाध्यक्ष अमरबहादुर चौधरी लगायतका समाजसेवीले उनीहरुलाई विवाहको अनुमति दिएका थिए । जनप्रतिनिधिले नै किशोरको जिम्मा लगाएर घर पठाइएकी किशोरी मृत फेला परेकी हुन् ।
घर गएपछि किशोरको आमाले जातिय विभेद गर्दै लाच्छना लगाएपछि उनले यस्तो निर्णय लिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानवाट देखिएको छ । आमा भौतिक आक्रमणमै उत्रिएपछि उनी शनिवार घर नजिकैको एउटा रुखमा झुण्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेकी थिइन् । किशोरीका माइती पक्षले आफ्नो छोरीले आफै यस्तो गरेको नभई उनको ह त्या गरेर रुखमा झु’ण्ड्याएको आरोप लगाएका छन् ।
यता, कर्णाली प्रदेशको जाजरकोटका २० वर्षीय नवराज बिकले पनि जातीय विभेद र अन्तरजातीय प्रेम सम्बन्ध कै कारण ज्यान गुमाउनु परेको छ । उनलाई जन्ती बनेर साथ दिन गएका अन्य दुई साथीको पनि ज्यान गएको छ । परिवारकै एक्ला छोरा नवराजको निधनले उनको परिवार विछिप्त बनेको छ ।
यो पनि : प्रेमिकालाई श्रीमती बनाउँन गएका नवराज, प्रेमिककै अघि आफै संसारबाट बिदा भए !
पटक–पटक मानसिकरूपमा तनाव र शारीरिकरूपमा कु’टपि’ट व्यहोरोका नवराजलाई शनिबार ठूलो सङ्ख्यामा साथी लिएर आउनु भनी युवतीले सल्लाह दिएका कारण सोहीअनुसार १९ साथी लिएर सोती गएका थिए । जब उनीहरु घर नजिकै पुग्दा युवतीभन्दा, युवतीकी आमाको नजर युवामा प¥यो । त्यसपछि उहाँले “जति पि’टाइ खाए पनि केही लागेन है, फेरि आइस् आज त मा’रेर फालिन्छ” भन्दै गाउँका मानिसलाई बोलाएपछि युवामाथि कु’टपि’ट शुरु भएको घाइते युवा आशिष विकले बताए । कु’टपि’ट शुरु हुँदै गर्दा आफूहरु भागेर करिब चार किलोमिटर दूरी पार गरेको आशिषको भनाइ छ । लखेटी–लखेटी भेरी नदीसम्म पु¥याउँदा धेरै साथी घाइते भएको उनको दाबी छ । नवराजको शनिबार नै निधन भयो भने ज्यान बचाउन नदीमा हामफालेकामध्ये चौरजहारी नगरपालिका–१ टीकाराम सुनार र भेरी नगरपालिका–४ का गणेश बुढाको पानीमै डुबेर निधन भयो । कु’टाइबाट घाइते भएका युवाले पानीमा पौडिन नसक्दा निधन भएको घाइतेले बताएका छन् । अन्य भेरी नगरपालिकाका सन्दीप विक, लोकेन्द्र सुनार र गोविन्द शाही अहिले पनि बेपत्ता छन् ।
घाइते युवा सरोज भँडेल भन्छन्, “हामी आधा घण्टासम्म सडकमा दैडिरहेका थियौँ । सडक तेर्साे भएकाले मारिने डर भएपछि नदीमा हा’मफालेका थियौँ । आफूहरुले नदीमा हा’मफाले पनि ढु’ङ्गामु’ढा गर्न छाडिएन । प्रहरी आएपछि हामीलाई पक्राउ गरेपछि बल्ल हामी सुरक्षित भएको महसुस भयो ।”
मृतक तीनै जनाको शव भेरी नदी किनारमा भेटिएको थियो । अन्यको खोजीकार्य जारी रहेको छ । घटनामा परेर भेरी नगरपालिकाका सुदीप खड्का, मदन शाही, सरोज भँडेल, आशिष विकलगायत १२ घाइते भएका छन् । खड्का र शाहीको चौरजहारी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ भने अन्य सामान्य उपचारपछि घर फर्केका छन्
सर्वेन्द्र खनालकै निर्देशनमा मेरो र युवराजका विरुद्ध काठमाडौमा उजुरी लिन मिल्ने, उहाँहरुको नमिल्ने ?
बिरामीको कोरोनाले निधन भएपछि किस्ट अस्पतालमा उच्च सावधानी
कपिलवस्तुमा थप १२ जनामा काेराेना पुष्टि, संक्रमित संख्या ४१४ पुग्याे
कोरोना अपडेट : विश्वभर ज्यान गुमाउनेको संख्या १५०,६०३ पुग्यो, २२ लाख २७ हजार बढी संक्रमित